नेपाल टेलिकमले इन्टरनेटको भाउ घटायो, अब कति ? | Safal Khabar
बुधबार, २२ असार २०७९
नेपाल टेलिकमले इन्टरनेटको भाउ घटायो, अब कति ?
विहीबार, ०९ असार २०७९, १४ : ४३
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले इन्टरनेटको मूल्य घटाएको छ । टेलिकमले हाल उपलब्ध गराइरहेको लिज कनेक्टिभिटीको नयाँ महशुल दर कायम गरेको हो । गत असार १ गतेदेखि लागू हुनेगरी इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेट दुवै लिज लाइनको महशुल दर ३६ प्रतिशतसम्म कम हुनेगरी कायम गरिएको टेलिकमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
इन्टरनेट लिज लाइन अन्तर्गत १ देखि २० एमबीपीएस ब्यान्डविथको महशुल दर पहिले रु. २,५०० रहेकामा अब रु. १,६०० मात्र हुनेछ । त्यसैगरी २१ देखि ५० एमबीपीएसको महशुल दर पनि रु. २,३०० बाट घटाएर रु. १,६०० नै कायम गरिएको छ ।
५१ देखि १०० एमबीपीएस र १०० एमबीपीएस ब्यान्डविथ भन्दा बढी क्षमताको महशुल क्रमशः रु. २,१०० र रु. १,९०० रहेकोमा अब दुवैको महशुल दर रु. १,५०० कायम गरिएको टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले जानकारी दिए ।
इन्ट्रानेट लिज लाइन अन्तर्गत १ देखि १० एमबीपीएस ब्यान्डविथको महशुल रु. २,७०० रहेकोमा अब रु. २,४००, ११ देखि १०० एमबीपीएसको रु. २,४०० रहेकोमा अब रु. २,१०० र १०० एमबीपीएस भन्दा बढीको रु. २,१०० रहेकोमा अब रु. १,८०० कायम गरिएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल टेलिकमले विभिन्न सरकारी तथा व्यावसायिक ग्राहकका मागअनुसार उच्च क्षमताको इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेट लिज सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
स्लोभियान्स्कमा रुसी बमबारीमा दुई जनाको मृत्यु
भक्तपुरमा बसको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु
नागरिकतासम्बन्धी अर्को विधेयक भोलि नै संसदमा लैजाने सरकारको तयारी
चलचित्र चिसो मान्छे यूएईमा प्रदर्शन हुने
चितवनबाट सवारी ‘लाइसेन्स’ दिने प्रक्रिया शुरु, साउन दोस्रो सातादेखि भरतपुरमै ट्रायल हुने
अमेरिका पढ्न पुगेका चितवनका एक युवाले खडा गरे ७ अर्बको साम्राज्य
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा प्रकाशन गर्न इच्छुक संघ संस्थाहरूसँग आवेदन माग्यो
संखुवासभा सामूहिक हत्याकाण्डः ४ जनालाई आजीवन कैद
छिटै भूमिहिन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरिन्छ : मेयर दाहाल
नेपाल डीपी लिमिटेडले डिम्याट खाता र मेरो सेयरको वार्षिक शुल्क बुझाउन अनुरोध
फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य, कतिमा पुग्यो लिटरमा ?
हात्ती वनभोेज कार्यक्रम विवादमा परेपछि प्रदेश पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले रकम भुक्तानी नगर्न दिए निर्देशन
भरतपुरमा लगत संकलन भएका सम्पुर्ण सुकुम्बासीले पाँच वर्षभित्र लालपुर्जा पाउछन् : रेनु दाहाल
कांग्रेसले गरेका कामको प्रचार गर्न नसकिएको वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाइ
मृतक लोकगायिका दिलमायाका पिताले दिए श्रेष्ठ विरुद्ध किटानी जाहेरी
फिफा विश्वकप २०२६ : आयोजक शहर र रंगशालाको सार्वजनिक
‘पार्टीभित्र बहस र विवाद हुँदा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन’: माधव नेपाल
सुख्खा पहिरोले थुनियो नारायणगढ–मुग्लिन सडक
चितवनमा भेटियो नयाँ चरा
आईएमई पे क्यासब्याक अफर सार्वजनिक
बलात्कार आरोपी तीन नाबालकलाई सुधारगृह पठाइयो